Soja njikwa soket bụ soket smart nke nwere usoro iheomume, ihe ngosi na njikwa mgba ọkụ. Ọ nwere ike mezue oke elele eletriki dịka voltaji, nke ugbu a, ikike ike ọrụ, ugboro ole, wdg, njikwa ike, ngosipụta data, njikwa mmepụta, wdg. Enwere ike iji ụdị ihe eji eme ihe maka chaja nke ebe akụrụngwa ezinụlọ na ike nchekwa nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ.
Mita mmiri nwere ọgụgụ isi ji njikwa valvụ nwere ọgụgụ isi dị ka okpokoro isi .Enyere MCU nke igbe ngwaọrụ optoelectronic, modul nkwukọrịta na sekit akara na igbe counter. mepụtara ma rụpụta ụlọ ọrụ anyị dịka nkọwa aka nke GB / T778.1, CJ / T188, CJ / T224.
Mita ume 3phase 4wire (nke dịpụrụ adịpụ) bụ ngwaahịa mmelite ike ọhụrụ nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara ma mepụta dịka nkọwa ndị dị na GB / T17215.321-2008 na GB / T17215.323-2008. Ngwaahịa a na-eji nnukwu sekit agbakwunyere na teknụzụ SMT, ya na ọrụ dị ka tụọ ike eletriki, nhazi data, nyocha oge, yana mmekọrịta ozi.
Mpempe ume eletrik nke 3fse 4wire (IC kaadị) bụ ngwaahịa mmelite ume ọhụrụ nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara ma mepụta dịka nkọwa ndị dị na GB / T17215.321-2008 na GB / T17215.323-2008. Ngwaahịa a na-eji nnukwu sekit agbakwunyere na teknụzụ SMT, ya na ọrụ dị ka tụọ ike eletriki, nhazi data, nyocha oge, yana mmekọrịta ozi.
A na-ejikarị ọdụ eletriki elele eletrik eletrik maka ike okpukpu atọ, enwere ike ịkwado ya na ọrụ nkwukọrịta RS485 na arụmọrụ nkwukọrịta ikuku, nke dịịrị ndị ọrụ mfe ịme ike, mkpokọta na njikwa nlekota anya. Ngwaahịa a nwere uru nke usoro dị elu, obere nha, na nrụnye dị mfe. Enwere ike ịwụnye ya ngwa ngwa ma kesaa ya na igbe nkesa iji ghọta ike dị iche iche, ọnụ ọgụgụ na nyocha nke mpaghara dị iche iche na ibu dị iche iche.
Elele elele elele eletriki eletrik (4 ọwa) bụ ihe ọhụrụ na-agbado ike nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara ma mepụta. Ngwaahịa a na-eji sekit arụkọtara ọnụ yana usoro mmepụta ihe nke SMT, ya na ọrụ dị ka nha ọkụ eletriki, nhazi data, nyocha oge, yana mmekọrịta ozi.
Usoro ihe ato LCD agbakwunyere ihe ngosi dijitalụ elektrọniki elektrọniki na-arụ ọrụ ọtụtụ na rs485
Ihe eji arụ ọrụ atọ dị n'ụdị atọ, ụdị elektrọniki nwere ọgụgụ isi nke eji ihe eji arụ ọrụ, ihe ngosipụta, RS485 nkwukọrịta dijitalụ na arụpụta ike eletriki eletriki, nwee ike ị nweta voltaji, ugbu a, ike na-arụ ọrụ, ike na-arụ ọrụ, ike, ugboro ugboro, ike ike , ngosipụta data, nnakọta na nnyefe, enwere ike iji ya mee ihe na ngwa mmegharị, akpaaka nkesa, ụlọ nwere ọgụgụ isi, na ịtụle ike, njikwa, na nyocha n'ime ụlọ ọrụ ahụ. Izu oke bụ ọkwa 1, na-achọpụta ihe ngosi LCD ma ọ bụ LED na-egosi ihe ngosi na nkwukọrịta teknụzụ dijitalụ RS485. Ọ dakọtara na DL / T645-2007 protocol nkwukọrịta MODBUS-RTU.